एपीएफ टोलीद्वारा चाँदीसहित पक्राउमहोत्तरी, महोत्तरी जिल्लाको मटीहानी नगरपालिका ९ स्थित हनुमान चोक ईलाकाबाट असोज १३ गते एपीएफ टोलीले एक लाख चार हजार रुपैयाँ बराबरको एक के.जी. चार सय १६ ग्राम चाँदीसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतमा घर बताउने २७ बर्षिय सुनिलकुमार ठाकुर र २० बर्षिय रोहितकुमार साह छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्बर ९ गणबाट खटिएको एपीएफ टोलीले उनीहरुलाई उक्त चाँदीसहित पक्राउ गरेको हो । भारतीय नम्बर बी आर ३० एम ७९९० नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरुलाई जाँद गर्दा उक्त चाँदी फेला परेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । एपीएफ टोलीले त्यसवेला उनीहरुले प्रयोग गरेको उक्त मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको छ ।
महोत्तरी, महोत्तरी जिल्लाको मटीहानी नगरपालिका ९ स्थित हनुमान चोक ईलाकाबाट असोज १३ गते एपीएफ टोलीले एक लाख चार हजार रुपैयाँ बराबरको एक के.जी. चार सय १६ ग्राम चाँदीसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतमा घर बताउने २७ बर्षिय सुनिलकुमार ठाकुर र २० बर्षिय रोहितकुमार साह छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्बर ९ गणबाट खटिएको एपीएफ टोलीले उनीहरुलाई उक्त चाँदीसहित पक्राउ गरेको हो । भारतीय नम्बर बी आर ३० एम ७९९० नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरुलाई जाँद गर्दा उक्त चाँदी फेला परेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । एपीएफ टोलीले त्यसवेला उनीहरुले प्रयोग गरेको उक्त मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको छ ।